FULL Video: Worker narrates shooting by Chinese employer
Gold deposits map of Zimbabwe 1988
There are over 4 000 recorded gold deposits, nearly all of them located on ancient workings. Zimbabwe remains under-explored to discover new deposits as well as realising the full potential of known deposits.
More than 90% of gold deposits in Zimbabwe are associated with greenstone belts which are some of the richest and comparable to those in some leading gold producing countries in the world like Australia, South Africa and Canada. Other gold deposits occur in the Limpopo Mobile Belt in the south of the country and in the Proterozoic Piriwiri rocks in the North-Western part of the country, outside the Zimbabwe creation.
Import substitution key in mining
(7212x6390pix) (1908x1690mm) Scale: 1:1 000 000
Drawn in the Geological Survey Office Harare
Author: Bartholomew, D.S.
Publisher: The Surveyor-General, Harare.
gold deposits gold deposits map Gold deposits map of Zimbabwe gold mining
TEPE June 22, 2020